Izingxenye Izithuthi Ukulolonga | Injection Molding Service - CBPMM
Kuyini Izithuthi Izingxenye Molding
izingxenye Izithuthi udini kuhilela yokukhiqiza izingxenye plastic ngezimoto usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba. Inqubo isetshenziselwa yokukhiqiza ingxenye enkulu ingaphakathi imoto futhi yangaphandle.
Umjovo udini inqubo esetshenziswa ngokukhiqiza mayelana 90% of the izingxenye yezimoto izimoto. Plastics athandwa kakhulu embonini yezimoto njengoba kukhona engasindi, kulula ukwenza, futhi okuhlala kakhulu kakhulu.
Nge ukusetshenziswa kabanzi umjovo inqubo yokubumba, ekukhiqizweni izingxenye yezimoto baba lula futhi kakhulu engabizi .
Iningi izingxenye imoto zingaba ngokushesha okukhulu usebenzisa ubuchwepheshe kanye kusukela ukukhiqizwa kwenziwa ngobuningi, izindleko incane kakhulu.
Embonini yezimoto uye wazuza kakhulu kusukela amasu yokukhiqiza umjovo ekubumbeni. Kuyinto umkhakha okuyinto uncika izingxenye kanye izingxenye okuyizinto ngokunemba-based, okuhambisana, futhi ephephile ukuyisebenzisa.
Ngakho, umjovo udini ingenye engcono yokukhiqiza nezinqubo bakule mboni yokukhiqiza izingxenye kakhulu enembile, ezifanayo, futhi uhambisane njengoba yaziwa.
Inqubo yokukhiqiza has azinakwa ukuba nil ngokunemba amaphutha ezingaba wusizo kakhulu embonini yezimoto. Izingxenye ekhiqizwa usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba kunamandla kakhulu futhi okuhlala isikhathi eside lapho kumelwe for embonini yezimoto.
With ukusetshenziswa umjovo udini ubuchwepheshe, ezimotweni babé engasindi okwandisa yabo uphethiloli ukusebenza kahle futhi ephephile ekukhiqizeni eliphezulu futhi okuhlala isikhathi eside izingxenye.
Izinzuzo Ukusebenzisa Plastic Injection Isikhunta for Izithuthi Izingxenye Molding
The automotive parts molding is a very esebenza kahle manufacturing process. Large quantities of automotive parts can be manufactured by this process.
The products can be manufactured in very less time which further adds to the efficiency of the manufacturing process. Injection molding process enables to manufacture automotive parts with almost iphutha rates.
Izingxenye yezimoto ekhiqizwa ngokusebenzisa le nqubo ningabaleli kakhulu eliphezulu. Imikhiqizo kukhona engasindi, bhala ukumelana, namandla ukumelana.
Izingxenye yezimoto kukhona engasindi okuyinto ngcono ukusebenza kahle fuel futhi enamandla kakhulu okubenza babe eliqinile le kakhulu.
Embonini yezimoto kudinga izingxenye kanye izingxenye eliphezulu okumele asetshenziswe ukuqinisekisa ukuphepha , futhi kungakho umjovo udini nqubo ekahle umkhakha.
Ukukhiqiza izingxenye yezimoto usebenzisa ubuchwepheshe umjovo udini kakhulu engabizi . Izindleko ezinkulu kuyinto sikubeke kule okuklama umkhiqizo kanye isikhunta. Lapho esekwenzile lokhu, imikhiqizo kungenziwa ekhiqizwa bulk- e ezinkulungwane noma ngisho e millions- okuletha phansi izindleko sezizonke zokukhiqiza kakhulu.
Ukuvumelana nezimo e Ukusetshenziswa Ukusingathwa kwendle, ukungcola
Umjovo udini inqubo yokukhiqiza ivumela nezimo of usebenzisa inhlaka ezingaphezu kweyodwa epulasitiki njengoba izinto zokusetshenziswa.
I silwenza Ungasebenzisa inhlanganisela amapulasitiki ezahlukene ezingasetshenziswa ukwandisa amandla, ukuqina, kanye nekhwalithi izingxenye yezimoto ekhiqizwa.
Fillers Ungase futhi ukungezwa inhlaka plastic ukwandisa amandla futhi rigidity imikhiqizo ekhiqizwa.
Isicelo avamile Izithuthi Izingxenye Molding
Izingxenye yezimoto udini ibaluleke kakhulu embonini yezimoto. Inengi elikhulu izingxenye yezimoto ekhiqizwa usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba.
Inqubo kwenza sikhiqiza imikhiqizo eliphezulu nokunemba ezisekelwe ezibaluleke kakhulu embonini yezimoto. I yokukhiqiza kwenziwa izinto eziningi ngobuningi futhi ngalokho alisona kakhulu engabizi.
Njengoba izingxenye yezimoto ekhiqizwa usebenzisa umjovo udini kukhona engasindi kakhulu, kuyasiza ngcono kukawoyela imoto. Ezinye izingxenye ezivamile yezimoto lapho ekhiqizwa usebenzisa inqubo umjovo udini zimi kanje:
Dashboard imoto okuyinto iyisonto panel ithuluzi like umshini wokubonisa izinga lejubane, isele nophethiloli, stereo izinhlelo, njll oluqanjwe inqubo umjovo ekubumbeni.
Ideshibhodi oluqanjwe le nqubo bhala ukumelana, umthelela ukumelana, futhi isikhathi eside kakhulu.
I bezinhlamvu ngoba izimpawu headlight, taillight, ohlangothini njll yezimoto akhiqizwa ngenqubo umjovo ekubumbeni.
Lezi izimo ukukhanya kungenziwa ekhiqizwa usebenzisa inhlanganisela amapulasitiki enikeza izinga kangcono futhi ihlala isikhathi eside. Amacala ukukhanya kukhona engasindi futhi iqine futhi amelana umthelela iqinisekisa nempilo ende yayo.
I amabhampa imoto ziye zashintsha kakhulu ekuhambeni kwesikhathi. Babeqale eyenziwe ngensimbi electroplated bese aluminium. Kusukela ngeminyaka yama-1980 kuqhubeke, abenziwe kusuka Plastics.
uhlobo oluhlukile amapulasitiki efana ingilazi polyesters kwagcizelela, polyurethane, polypropylene Ushintshe, polycarbonates njll zazisetshenziselwa yokukhiqiza amabhampa.
I amabhampa plastic okwenziwe kusuka umjovo udini kukhona engasindi kunalena zensimbi ziba amandla e ukushayisana ezincane kangcono ngaphandle umonakalo ohlala njalo.
Lezi zihlalo ezenziwe kule imoto ekhiqizwa usebenzisa ubuchwepheshe umjovo ekubumbeni. Ngokusebenzisa izinhlobo ezahlukene zepulasitiki, kungenzeka ukuba akhiqize izihlalo engasindi okuyinto ezikahle ukuze ahlale futhi kungenziwa esevalelwe ezincane ezikhaleni ezihlangene.
Izihlalo ezivezwa kule nqubo eliphezulu futhi bhala ukumelana. Inqubo ukukhiqizwa futhi kakhulu engabizi kuqhathaniswa nezinye izindlela yokukhiqiza.
I panel umnyango izimoto akhiqizwa inqubo umjovo ekubumbeni. I panel umnyango hhayi kuphela ukunikeza ukufinyelela Interiors, kodwa nawo uniketa kuvikelwa ngenkathi ushayela.
I panel umnyango aqukethe plastic olubunjiwe izingxenye nge kwezindawo zokusebenza yokugcina. I panel umnyango zenziwe umjovo udini kukhona umthelela ukumelana, engasindi futhi iqine. Isici engasindi kusiza kalula ukusetshenziswa futhi ngcono ukusebenza kahle nophethiloli.
Amasondo ayo izimoto ingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu futhi oluqanjwe inqubo umjovo ekubumbeni. I ejwayelekile amasondo ayo is oluqanjwe ukubumba amapulasitiki efanelekayo like polyurethane phezu core sensimbi.
Amasondo ayo ezikhiqizwa yilo ubuchwepheshe amayelana 20% alula kakhulu kunomoya amasondo amadala ayo. Lokhu kuthuthukisa ukuphatha maneuverability of amasondo ayo.
Amasondo ayo futhi okuhlala isikhathi eside futhi nomthelela ukumelana lapho ekhiqizwa usebenzisa ubuchwepheshe umjovo ekubumbeni.
Copyright 2020 © CBPMM Ibalazwe